Nchọpụta ọhụụ maka ikike ikuku | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Nchọpụta ọhụụ maka ike ikuku
Portillo nke German | | Ike mmiri, Ike imeghari ohuru
Ike ikuku bụ ụdị ume ọhụrụ nke, dị ka aha ya na-egosi, na-eji ohere dị iche na oke osimiri nke ebili mmiri nweta nweta. Agbanyeghị, ọ bụ ụdị ume emere maka ume ọhụrụ nke ka pere mpe nke mepụtara n'ihi obere nrụpụta ya na nsogbu ọ na-enweta n'ike n'ụzọ bara uru.
Agbanyeghị, ekele maka oru ngo ejiri ego sitere na European Union, FLOTEC jisiri ike rụpụta turbine maka inweta ume site na mmiri nke nwere arụmọrụ yiri nke ikuku ikuku. Nke a bụ ndekọ na akụkọ ihe mere eme nke ume ọhụrụ na, karịa ihe niile, ozi ọma maka ọgbọ dị ike nke ọdịnihu.
1 Development nke oru oma tobaim
2 Projectlọ Ọrụ Na-arụ ọrụ Ike Ike
Development nke oru oma tobaim
Igwe toro toro nke mepụtara site na FLOTEC (Floating Tidal Energy Commercialization) ọ nweela ike ịmepụta ihe karịrị 18MWh (awa megawatt) n'ime oge ule XNUMX na-enweghị nkwụsị. Mmezu a putara na ike ikuku nwere ike inweta nguzo ahia ahia nke mba ebe obu na odi ka oru oma dika nke ikuku nke ikuku.
Enwere ike ịnweta ike site na ebili mmiri n'ụzọ yiri nke ahụ ejiri mee nke ọma na ikuku ifufe, ma jiri turbines banye n'ime mmiri. N'ụzọ dị otú a, ekele maka njupụta dị elu nke mmiri ma e jiri ya tụnyere ifufe, ọ ga-ekwe omume iji ohere nke mmegharị nke mmiri na-eme.
Ike ikuku nwere ikike dị ukwuu ma ọ bụrụ na etolite ma nyochaa ya nke ọma. Agbanyeghị, ruo ugbu a, ikike ya agabigaghị ma e jiri ya tụnyere ndị ọrụ ume ọkụ ndị ọzọ dịka anyanwụ na ifufe. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na gburugburu mmiri chọrọ ka ụlọ ọrụ na-emepụta ume na-adịgide adịgide karị, na-eguzogide ọgwụ mmebi nke nnu mepụtara, na ha enweghị mmetụta na mmiri na ahịhịa mmiri, na ha na-eguzogide oke ihe omume ihu igwe, wdg. . Ya kpatara, na mmelite nke teknụzụ na ike ikuku dị oke ọnụ ma sie ike karịa ndị ọzọ.
Projectlọ Ọrụ Na-arụ ọrụ Ike Ike
Emebere oru a site na ego European FLOTEC nke emepụtara iji nwee ike melite ma jiri ikike ị nweta ike nke oke osimiri nwere. Ike ikuku, ike ikuku na ikuku nke ala bụ ụdị ume ọhụrụ nwere ike inye aka na imeziwanye usoro okike, nwere ike inye aka n'ọgụ megide mgbanwe ihu igwe, mepụta ọrụ ọhụụ ma zụlite ọtụtụ teknụzụ nke mmeghari ohuru.
Ihe oru ngo a na-agbali igosi na oganihu nke uzu ike nke uzu ike nwere ike inyere aka belata onu ahia na ihe egwu, meziwanye ntụkwasị obi nke ike oku ma webata udiri ike a n'usoro ahia iji tinye ya na uzo eletrik nke niile Europe.
Igwe ikuku nke mepere emepe nke mepụtara, nke fọrọ nke nta ka ọ rụọ ọrụ dị ka igwe ụgbọ mmiri, Emere ya ka ọ dịrị ihe karịrị afọ 20 ma nwee ike ịgbakwunye ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị mmiri mmiri ọ bụla, ọ bụrụhaala na ọ dị ihe dị ka mita 25. N’ọnwa Eprel nke afọ a, turbine SR2000 jisiri ike mepụta MW abụọ nke kachasị ike. Agbanyeghị, ndị ọrụ ngo nọ na-arụ ọrụ iji melite arụmọrụ ma jikwaa ịmepụta 18MWh. Iji meziwanye arụmọrụ nke turbine, ha mụbara dayameta nke rotor site na 16 ruo 20 mita. Nke a kpatara mmụba 50% na ike ike. Mmemme ule na-agba ọsọ na European Marine Energy Center (EMEC) na Orkney, Scotland (UK), ebe ejikọtara teknụzụ nke ikike na grid ike Orkney iji bupu ike na ọkwa.
Ihe oru a na-enyocha mmụba nke ike na arụmọrụ hydrodynamic iji belata ụgwọ na ndozi. Dịka ị pụrụ ịhụ, nke a bụ ihe dị ịrịba ama n'akụkọ ihe mere eme nke ike ikuku, nke ga-eme ka ọdịiche dị n'egwuregwu na ike ndị ọzọ nwere ike imegharị n'oge ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Nchọpụta ọhụụ maka ike ikuku
Manuel Garcia (@ Onyekachukwuike2000) dijo
Enwere ume dị ọcha karịa karịa ikpuchi mkpa nke "mmadụ", ihe anyị na-enweghị bụ "igwe", nke nwere ike ịnakọta ma tinye uche ya nke ọma na uru.
Zaghachi Manuel Garcia (@ TURBOMOTOR2000)
Azụmaahịa ezinụlọ nke meriri na mbugharị nrụzigharị (Norvento)
Dekọọ ikike arụnyere na ume ọhụrụ